I-SimplyCast: Iplatifomu yoNxibelelwano lwaBathengi | Martech Zone
I-SimplyCast: Iplatifomu yoNxibelelwano lwaBathengi
NgoMvulo, Aprili 7, 2014 NgoLwesithathu, nge-21 kaJanuwari 2015 Douglas Karr
The SimplyCast 360 yokuZenzekelayo Manager Idibanisa iziphumo ezili-15 zeqonga kwiqonga elinye, elenza i-marekters ukuba yakhe amaphulo okuthengisa azenzekelayo kunye nokuhamba konxibelelwano. Isisombululo sabo sikuvumela ukuba ufikelele kubantu abalungileyo ngexesha elifanelekileyo ngendlela yonxibelelwano abayithandayo. Zibandakanye nabathengi kunye nethemba ngokusekwe kwidatha egciniweyo, umdla wabo, kunye nokunxibelelana kwabo kwangaphambili nombutho wakho ukwandisa imbuyekezo kutyalo-mali.
The SimplyCast Isisombululo sokuthengisa esizenzekelayo sikuvumela ukuba usete amaphulo akho njengetshathi yokuhamba, ekuvumela ukuba ufikelele kwaye uzibandakanye nethemba lakho kunye nabathengi ngeendlela ezininzi:
Ulawulo oludibene nabathengi - Yazi ngqo ukuba zeziphi izikhokelo zakho ezishushu kwaye ungabhenela njani kwiimfuno zabo.
email Marketing -Yila, thumela kwaye ulandele umkhankaso wentengiso ye-imeyile.
Uluhlu loMlawuli -Yakha, gcina kwaye uceke uluhlu lwakho loqhakamshelwano olunomthamo wokugcina ongenamda.
form Umakhi -Yila iifom ezikwi-Intanethi kunye nemveliso elula kwezentengiso. Akukho lwazi lwe-HTML luyafuneka.
Imihla yokuLungisa -Indlela ekhawulezayo nelula yokwenza iphepha elininzi lokufika ukuze ukwazi ukujonga ukuba leliphi elona phepha lisebenza kakuhle.
UPhando lwe-Intanethi -Yila kwaye uthumele isaveyi ekwi-intanethi ezisa ingxelo yomsebenzisi kwimizuzu.
Ukulandela umkhondo -Ukulandela umkhondo wokucofa ngokulula kunye namaxabiso avulekileyo okunceda ukufumanisa ukuba yeyiphi intengiso esebenza kakuhle.
Umphenduli ozenzekelayo -Yakha ubudlelwane obomeleleyo nobukhawulezileyo nesisombululo sabo sokulandela ngokuzenzekelayo.
Ukubeka iliso kuluhlu lwabamnyama - Sukuthatha ithuba kwizibonelelo zakho zentengiso kunye nodumo. Qala ukubeka esweni i-IP yakho namhlanje.
Ukuthengisa ngeFeksi -Thumela ukuqhuma kwefeksi kumawakawaka emibutho ngaphandle kwengxaki. Ilungele ukujolisa kumashishini endawo.
Ulawulo lweMicimbi -Imikhankaso yomnyhadala enezixhobo zokwandisa ukubakho.
Ukusasazwa kwelizwi -Sasaza ngokuzenzekelayo imiyalezo yelizwi erekhodiweyo ukwazisa nokukhumbuza abathengi bakho.
Ukuthengisa imiyalezo -Nxibelelana nabathengi bakho ngokubeka umyalezo ezandleni zabo.
Intengiso yoLuntu -Dibanisa ezona ndawo zidumileyo zonxibelelwano, kubandakanya i-Facebook kunye ne-Twitter.
tags: I-autoresponderiliso elimnyamaemail Marketingulawulo lomsithoFacebookfaxifeksiumakhi wefommaphephauluhlu lolawulouphando kwi-intanethiisahluloukuthengisa kwezentlaloukuthengisa umbhaloTwitterusasazo ngelizwi
ICirrus Insight: I-Salesforce kunye nokudityaniswa kweGmail